Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) - Hello Sayarwon
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း )
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း )
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ကဘာလဲ။
ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဆိုသည်မှာ ခန္ဓါကိုယ်မှ သွေးဆဲလ်အသစ်များထုတ်လုပ်ခြင်း ရပ်တန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်လာလျှင် မောပန်းခြင်း ၊ ရောဂါပိုးများဝင်ရောက်လွယ်ခြင်းနှင့် သွေးထွက်လွယ်ခြင်းတို့ဖြစ်စေပါတယ်။
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးခြင်းလို့သိကြတဲ့ ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီး သွေးအားနည်းခြင်းဟာ ရှားပါးပြီး အမေရိက သွေးဂျာနယ်ရဲ့စစ်တမ်းများအရ နှစ်စဉ် လူတစ်သန်းမှာ ဝ.၇ မှ ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဆီးချိုသွေးချို ၊အစာအိမ်နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါဌာနမှအချက်အလက်များအရ ထိုရောဂါဟာ ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးရောတွင် ညီမျှစွာဖြစ်လေ့ရှိပြီး အသက်၂၀ နှင့် ၂၅ ကြား နှင့် အသက် ၆၀ အထက်ပိုင်းများတွင်ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိရဖို့ ဆရာဝန်နှင့်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
– မောပန်းခြင်း ၊
– အသက်ရှူမဝ၍ မောနေခြင်း ၊
– နှလုံးခုန်နှုန်းပုံမှန်မဟုတ်ခြင်း သို့ မြန်နေခြင်း ၊
– အသားအရေများ ဖျော့နေခြင်း ၊
– လတ်တလောဖြစ်စေ နာတာရှည်ဖြစ်စေ ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရခြင်း ၊
– အကြောင်းရင်းမရှိဘဲသွေးထွက်ခြင်း သို့ သွေးထွက်လွယ်ခြင်း ၊
– နှာခေါင်း ၊ သွားဖုံးများမှသွေးထွက်ခြင်း ၊
– ထိရာ ရှာရာများမှ သွေးအကြာကြီးထွက်နေခြင်း ၊
– အရေပြားပေါ်တွင်အနီကွက်များပေါ်လာခြင်း ၊
– ခေါင်းမူးခြင်း နှင့် ခေါင်းကိုက်ခြင်း တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဟာ ရုတ်တရက်ဖြစ်စေ ၊ သီတင်းပါတ်များစွာ လများစွာကြာမှဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ နာမကျန်းမှုဟာလည်း ခဏတာဖြစ်စေ နာတာရှည်ဖြစ်စေ ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဟာ အရမ်းပြင်းထန်ပြီး သေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ရောဂါလက္ခဏာများရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြိးအသေးစိတ်သိရဖို့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍သင့်မှာအထက်ဖော်ပြပါရောဂါလက္ခဏာများရှိနေပြီဆိုလျှင်တော့ ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူညီကြပါဘူး ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသိရှိရဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာအကောင်းဆုံးပါ ။
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သင့်ရဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီကို ထိခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အခါ သွေးဆဲလ်အသစ်ထုတ်လုပ်မှုများ နည်းသွားခြင်း သို့ ရပ်တန့်သွားပြီး သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ရိုးတွင်းချည်ဆီကို ယာယီဖြစ်စေ ၊ အမြဲဖြစ်စေ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပြီး သွေးထုတ်လုပ်မှုကိုသက်ရောက်စေတဲ့အရာတွေကတော့ …
– ဓါတ်ရောင်ခြည်နှင့်ဓါတုကုထုံးများ ။ ကင်ဆာကိုကုသတဲ့ကုထုံးတွေက ကင်ဆာဆဲလ်များကို သတ်နေစဉ်မှာပဲ ရိုးတွင်းချည်ဆီကဲ့သို့ ကျန်းမာသောဆဲလ်များကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းခြင်းဟာ ထိုကုထုံးတွေရဲ့ ယာယီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– အန္တရာယ်ရှိသော ဓါတုပစ္စည်းများနှင်ထိတွေ့ခြင်း ။
ပိုးသတ်ဆေး ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဓါတုပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာလည်း ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ဆီရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘန်ဇင်းနဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာလည်း သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ယခုလိုအကြောင်းများကြောင့် သွေးအားနည်းခြင်းဟာတော့ သင့်ကိုနာမကျန်းဖြစ်စေတဲ့ဓါတုပစ္စည်းများနဲ့ထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။
သွေးလေးဘက်နာကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးများနှင့် ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်းဟာလည်း ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
– မိမိကိုယ်ကိုပြန်တိုက်သည့် ခုခံအားဆိုင်ရာရောဂါများ ။
သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာတဲ့ဆဲလ်များကိုပြန်တိုက်တဲ့ ခုခံအားရောဂါတွင်လည်း သင့်ရဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီထဲမှာရှိတဲ့ ပင်မဆဲလ်များပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
– ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်း ။
အချို့လူများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်လည်း ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကတော့ hepatitis , Epstein-barr , cytomegalovirus , parovirus B19 , HIV virus တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွက် ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ သင့်ရဲ့ ရိုးတွင်းချည်ဆီကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
– အကြောင်းရင်းမသိသောအရာများ ။
ကိစ္စတော်တော်များများတွင်တော့ ဆရာဝန်များဟာ ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကို ကောက်ချက်မချနိုင်ကြပါဘူး။ ထိုအရာမျိုးကို အကြောင်းရင်းမသိသော ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍သွေးအားနည်းခြင်းဟု ခေါ်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
– ကင်ဆာအတွက် ဓါတ်ရောင်ခြည်အားများစွာဖြင့်ကုသခြင်း သို့ ဓါတုကုထုံးများဖြင့်ကုသခြင်း ၊
– အန္တရာယ်ရှိသော ဓါတုပစ္စည်းများနှင့်ထိတွေ့မိခြင်း၊
– ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ရောဂါများတွင်သုံးသော chloramphenicol နှင့် လေးဘက်နာရောဂါတွင်သုံးသော gold compounds ကဲ့သို့ဆေးများသုံးစွဲခြင်း။
– သွေးနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများ ၊ ခုခံအားရောဂါများ နှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကူးစက်ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းများ ၊
– ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ( ရှားပါး) ။
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါကိုရှာဖွေစမ်းသပ်ဖို့ ဆရာဝန်ဟာသင့်ကိုအောက်ပါတို့ကို လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် သွေးနီဥ ၊ သွေးဖြူဥ နှင့် သွေးမွှားတို့ဟာ ပမာဏတစ်ခုအတွင်းမှာရှိပါတယ်။ ထို ၃ မျိုးစလုံးရဲ့ပမာဏဟာ အရမ်းနည်းလာတဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ဟာ ရိုးတွင်းချည်ဆီအားနည်းပြီးသွေးအားနည်းခြင်းကို သံသယရှိပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဆေးမှုကို အတည်ပြုရန်သင့်ရဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီနမူနာကိုယူပြီးစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆရာဝန်ဟာ အပ်တစ်ချောင်းကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ခန္ဓါကိုယ်ရှိ ပေါင်ရိုးကဲ့သို့အရိုးကြီးကြီးတစ်ခုမှရိုးတွင်းချည်ဆီနမူနာကို ယူပါလိမ့်မယ်။ အခြားသွေးနှင့်ဆိုင်သောရောဂါများကိုပါရှာဖွေအတည်ပြုရန် ရိုးတွင်းချည်ဆီနမူနာကို မိုက်ခရိုစကုပ်တွင်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းခြင်းတွင်တော့ ရိုးတွင်းချည်ဆီမှာရှိတဲ့သွေးဆဲလ်ပမာဏဟာ ပုံမှန်ထက်နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရိုးတွင်းချည်ဆီကြောင့်သွေးအားနည်းခြင်းဆိုတာကို အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရဖို့ အခြားစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။
Aplastic Anemia (ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီး၍ သွေးအားနည်းခြင်း ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသခြင်းအပိုင်းတွင်တော့ အပျော့စားအခြေအနေများအတွက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေခြင်း ၊ ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်သွေးသွင်းခြင်းနှင့် ဆေးဝါးကုသမှုများပြုလုပ်ခြင်း နှင့် အလွန်ပြင်းထန်သောအခြေအနေများတွင်ရိုးတွင်းချည်ဆီအစားထိုးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သွေးဆဲလ်ပမာဏအလွန်အမင်းလျော့နည်းလာတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေဟာ အသက်အန္တရာယ်ရှိပြီး ဆေးရုံချက်ချင်းတင်ပြီးကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းခြင်းကိုကုသရာတွင်သွေးထွက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပြီး သွေးအားနည်းခြင်းလက္ခဏာများကိုသက်သာစေဖို့ သွေးသွင်းခြင်းများပြုလုပ်ကြပါတယ်။
သွေးသွင်းခြင်းဟာ သွေးအားနည်းခြင်းအတွက်ကုသမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းသင့်ရိုးတွင်းချည်ဆီမှမထုတ်နိုင်တဲ့သွေးဆဲလ်များကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေပါတယ်။ အချိန်ကြာလာရင်တော့ ခန္ဓါကိုယ်မှ ပြင်ပမှဝင်လာသောသွေးများကိုတိုက်ခိုက်ရန်ပဋိပစ္စည်းများပေါ်လာပြီးရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေရာတွင် အားနည်းသွားကြပါတယ်။ ခုခံအားကိုချပေးသည့်ဆေးများသုံးခြင်းဖြင့်ယခုလိုနောက်ဆက်တွဲပြသနာများကိုသက်သာစေပါလိမ့်မယ်။
လှူဒါန်းသူဆီမှပင်မဆဲလ်များနှင့်ရိုးတွင်းချည်ဆီကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အစားထိုးကုသခြင်းဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်သွေးအားနည်းရောဂါခံစားနေရသူတွေအတွက်တစ်ခုတည်းသောအောင်မြင်တဲ့ကုသမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးတွင်းချည်ဆီအစားထိုးခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ပင်မဆဲလ်အစားထိုးခြင်းဟာအသက်ငယ်ပြီးသင့်တော်တဲ့လှူဒါန်းသူ(အထူးသဖြင့်ဆွေမျိုး)ရှိတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကကုသတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပင်မဆဲလ်အစားထိုးခြင်းဟာလည်းအန္တရာယ်များရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ဟာအစားထိုးပစ္စည်းကိုဆန့်ကျင်နိုင်ပြီးနောက်ဆက်တွဲရောဂါများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာတော့ အစားထိုးကုသနိုင်မှာမဟုတ်သလို သင့်တော်တဲ့အလှူရှင်ကိုလည်းရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
– ခုခံအားချပေးသည့်ဆေးများ ။
ရိုးတွင်းချည်ဆီအစားထိုးကုသ၍မရသောလူများ သို့ ခုခံအားရောဂါကြောင့်ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းသူများတွင်ခုခံအားချပေးသည့် သို့ ခုခံအားကိုပြောင်းလဲပေးသည့်ဆေးများပါဝင်ပါတယ်။ဥပမာ cyclosporineနှင့် thymocyte globulin ဆန့်ကျင်ဆေးများ ။ ထိုဆေးများဟာ သင့်ရဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီကိုထိခိုက်စေတဲ့ခုခံအားဆဲလ်များကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ထိုအခါသင့်ရဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီဟာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးသွေးဆဲလ်အသစ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ cyclosporine နှင့် thymocyte globulin ဆန့်ကျင်ဆေးများကို ယှဉ်တွဲအသုံးပြုကြပါတယ်။ methylprednisolone ကဲ့သို့စတီးရိုက်ဆေးများကိုလည်း ထိုဆေးများနှင့်အတူတူပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခုခံအားချသည့်ဆေးများဟာ ရိုးတွင်းချည်ဆီအားနည်း၍သွေးအားနည်းခြင်းကိုကုသရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ ထိုဆေးများဟာ သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကို အားနည်းသွားစေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထိုဆေးများသောက်သုံးနေခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း သွေးအားနည်းခြင်းဟာပြန်လည်ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။
– ရိုးတွင်းချည်ဆီလှုံ့ဆော်ဆေးများ ။
sargramostim (Leukine), filgrastim (Neupogen) and pegfilgrastim (Neulasta), and epoetin alfa (Epogen, Procrit) ကဲ့သို့ဆေးများဟာလည်း ရိုးတွင်းချည်ဆီကို သွေးဆဲလ်အသစ်များထပ်မံထုတ်လုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုဆေးများကို ခုခံအားချသည့်ဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
– ပိုးသတ်ဆေး ၊ ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးများ ။
ရိုးတွင်းချည်ဆီပျက်စီးပြီးသွေးအားနည်းခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုပါအားနည်းစေပါတယ်။ ထိုအခါသင့်ရဲ့သွေးလမ်းကြောင်းထဲမှာ ရောဂါပိုးတွေကိုသတ်ဖို့ သွေးဖြူဥအနည်းငယ်သာကျန်ရှိပါတော့တယ်။ ထိုအခါ သင့်ကိုရောဂါပိုးများ ဝင်ရောက်ကူးစက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဖျားတက်ခြင်းကဲ့သို့ကူးစက်ရောဂါများရဲ့ ပထမရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကတည်းက ဆရာဝန်နှင့်ပြသသင့်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ပါရှိစေနိုင်တာကြောင့် ကူးက်ရောဂါတွေကို ပိုဆိုးမလာစေရန်လိုပါတယ်။ အကယ်၍သင့်တွင်း ပြင်းထန်တဲ့ရိုးတွင်းချည်ဆီအားနည်းပြီးသွေးအားနည်းခြင်းရှိပါက ဆရာဝန်ဟာ ကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်ဖို့ ပိုးသတ်ဆေးနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်သက်ဆေးများကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
– အခြားကုသမှုများ ။ ကင်ဆာအတွက်ကုသမှုများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းခြင်းကတော့ ထိုကုသမှုတွေပြီးဆုံးတာနဲ့သက်သာလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးများကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်းလည်းထိုနည်းလည်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းခြင်းရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကတော့ သွေးသွင်းဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများတွင်တော့ ကိုယ်ဝန်နှင့်ဆိုင်တဲ့သွေးအားနည်းခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်ပြီးဆုံးတာနဲ့ပျောက်ကင်းသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ထိုသို့မပျောက်ကင်းလျှင်တော့ ကုသမှုလိုအပ်ပါတယ်။
– ဒဏ်ရာရခြင်းနှင့်သွေးထွက်ခြင်းတို့မှရှောင်ရှားနိုင်ရန် အားကစားများနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်း၊
– သင့်ရဲ့လက်ကိုမကြာခဏဆေးပေးခြင်း ၊
– တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးမှန်မှန်ထိုးခြင်း ၊
– တတ်နိုင်သလောက်လူအစုအဝေးများမှရှောင်ရှားခြင်း ၊
– အောက်စီဂျင်နည်းသောနေရာများ သို့ လေယာဉ်ပျံမစီးမီဆရာဝန်နှင့်တွေ့ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း ။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် သွေးအရင်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အကယ်၍သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိသေးပါက အသေးစိတ်သိရှိရဖို့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Aplastic anemia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/aplastic-anemia/home/ovc-20266528. Accessed 17 Apr 2017
Aplastic Anemiaaplastic anemia. https://medlineplus.gov/aplasticanemia.html. Accessed 17 Apr 2017
What Is Aplastic Anemiaaplastic anemia? http://www.webmd.com/a-to-z-guides/aplastic-anemia#1-2. Accessed 17 Apr 2017